DEG DEG:- Dab aad u xoogan oo goordhaw ka kacay qeyb ka mid ah suuqa Bakaaraha ee Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Dab aad u xoogan oo goordhaw ka kacay qeyb ka mid ah suuqa Bakaaraha ee Muqdisho
Dhismo ku yaal suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho gaar ahaan nawaaxiga qeybta loo yaqaano Cabdil Shideeye ayaa la sheegayaa inuu goordhaw ka kacday dab aad u xoogan, kaas oo haatan damintiisa si weyn loola tacaalayo.
Inkastoo warar kala duwan ay kasoo baxayaan qaabka uu dabkaasi ku bilawday ayaa hadane waxaa socda dadaalo xoogan oo dabkaasi lagu daminaayo.
Mid ka mid ah dadka ku sugan goobta uu haatan dabka ka socdo oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay ayaa u sheegay in dabka loo maleeynayo inuu ka dhashay koronto, kaas oo markii dambe kusii fiday dhismooyin ku dhaw dhismaha uu markii hore dabka ka kacay.
Gawaaridda dab-damiska oo ay leedahay shirkadaha Hormuud ayaa la sheegayaa inay durbadiiba soo gaareen goobta uu dabka ka kacay, waxaana haatan lagu howlan yahay sidii loo damin lahaa dabkaas.
Ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka ayaa la sheegayaa inay soo gaareen goobta uu dabka ka soconaayo, kuwaas oo halkaasi ka ilaalinaya inay ka dhacdo bililiqo, waxaana xilliyada qaar goobtaasi laga maqalaya rasaas ay ridayaan ciidnkaaas.
Suuqa Bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn ee ku yaala dalka Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore sidaan oo kale u gubtay, waxaana ka dhashay khasaare hantiyadeed oo aad u badan.
Dhinaca kale, ma jirto warar madax banaan oo xaqiijinaya, sida rasmiga ah uu dabka haatan soconaya markiisi hore ku bilawday.
Xaaladda goobta uu dabka ka kacay ayaa ah mid aad u kacsan, waxaana weli socdo dadaalo lagu daminaayo dabka.